Nehemiya 4 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Genesisi Eksodho Revhitiko Numeri Dheuteronomi Joshua Vatongi Rute 1 Samueri 2 Samueri 1 Madzimambo 2 Madzimambo 1 Makoronike 2 Makoronike Ezra Nehemiya Esteri Jobho Mapisarema Zvirevo Muparidzi Rwiyo rwaSoromoni Isaya Jeremiya Mariro Ezekieri Dhanieri Hosiya Joeri Amosi Obhadhiya Jona Mika Nahumi Habhakuki Zefaniya Hagai Zekariya Maraki Mateu Mako Ruka Johani Mabasa VaRoma 1 VaKorinde 2 VaKorinde VaGaratiya VaEfeso VaFiripi VaKorose 1 VaTesaronika 2 VaTesaronika 1 Timoti 2 Timoti Tito Firimoni VaHebheru Jakobho 1 Petro 2 Petro 1 Johani 2 Johani 3 Johani Judha Zvakazarurwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 Zvino Sanibharati+ paakangonzwa kuti takanga tichivakazve rusvingo, akatsamwa,+ akagumbuka kwazvo, uye akaramba achinyomba+ vaJudha. 2 Akatanga kutaura ari pamberi pehama dzake+ neuto rehondo reSamariya kuti: “VaJudha ava vasina simba vari kuitei? Vachakwanisa vari voga here? Vachabayira zvibayiro here?+ Vachapedza nezuva rimwe chete here? Vachafukunyura matombo mumirwi yemarara+ iwo zvaakatsva here?” 3 Zvino Tobhiya+ muAmoni+ aiva pedyo naye, uye akati: “Kunyange chavari kuvaka, kana gava+ rikachizendamira, chokwadi richaputsa rusvingo rwavo rwematombo.” 4 Inzwai,+ haiwa Mwari wedu, nokuti tava chinhu chinozvidzwa;+ uye dzorerai kuzvidza kwavo+ pamisoro yavo, uye itai kuti vapambwe munyika yokutapwa. 5 Musafukidza kukanganisa kwavo+ nechivi chavo pamberi penyu. Ngachirege kudzimwa, nokuti vakatsamwisa vavaki. 6 Naizvozvo takaramba tichivaka rusvingo, uye rusvingo rwose rwakasvika pakubatana kusvika pahafu yokukwirira kwarwo, uye vanhu vakaramba vaine shungu dzokushanda.+ 7 Zvino Sanibharati+ naTobhiya+ nevaArabhiya+ nevaAmoni+ nevaAshdhodhi+ pavakangonzwa kuti kugadzirwa kwemasvingo eJerusarema kwakanga kwaenderera mberi, nokuti pakaputsika pakanga patanga kuvharwa, vakatsamwa kwazvo. 8 Vose vakatanga kurangana+ kuti vauye varwe neJerusarema vandikanganise. 9 Asi takanyengetera+ kuna Mwari wedu tikaramba takaisa varindi kuti vavarindire masikati nousiku. 10 Judha akatanga kuti: “Simba revatakuri vemitoro+ raderera, kune marara mazhinji kwazvo;+ uye isu hatichagoni kuvaka parusvingo.” 11 Uyezve, vavengi vedu vakaramba vachiti: “Havasi kuzoziva+ uye havasi kuzoona kusvikira tasvika pakati pavo chaipo, uye tichavauraya tikamisa basa racho.” 12 Zvino pose paiuya vaJudha vaigara pedyo navo, vaiti kwatiri kagumi: “Vachauya vachibva kunzvimbo dzose dzamuchadzoka kwadziri, kuno kwatiri.” 13 Naizvozvo ndakaramba ndakaisa vanhu mumativi akadzikira kwazvo seri kworusvingo panzvimbo dzisina chinhu, uye ndakaramba ndakaisa vanhu maererano nemhuri dzavo vaine mapakatwa avo,+ mapfumo avo marefu+ nouta hwavo. 14 Pandakaona kutya kwavaiita ndakabva ndasimuka ndikati kuvanokudzwa+ nevatevedzeri vevatongi+ nevamwe vanhu vose: “Musavatya.+ Yeukai Jehovha Iye mukuru+ neanotyisa;+ uye rwirai hama dzenyu,+ vanakomana venyu nevanasikana venyu, madzimai enyu nemisha yenyu.” 15 Zvino vavengi vedu vakanzwa kuti takanga tazviziva, zvokuti Mwari wechokwadi akanga akanganisa zano ravo+ uye tose takanga tadzokera kurusvingo, mumwe nomumwe pabasa rake, 16 chokwadi, kubvira pazuva iroro hafu yemajaya angu+ yakanga ichiita basa nehafu yawo yakanga yakabata mapfumo marefu, nhoo nouta nenguo dzokuzvidzivirira nadzo dzine simbi;+ uye machinda+ akanga ari shure kweimba yose yaJudha. 17 Kana vari vavaki vaiva parusvingo nevaya vaitakura zvinorema zvevatakuri vemitoro, mumwe nomumwe aiita basa racho noruoko rwake rumwe chete, rumwe rwacho+ rwakabata chombo chinoita zvokukandwa.+ 18 Vavaki vakanga vakasungira, mumwe nomumwe bakatwa rake muhudyu make,+ vachivaka;+ uye aifanira kuridza hwamanda+ akanga ari pedyo neni. 19 Zvino ndakati kuvanokudzwa nevatevedzeri vevatongi+ nevamwe vanhu vose: “Basa iguru, rakapararira, uye takatarangana parusvingo mumwe ari kure nomumwe. 20 Kunzvimbo yamunonzwa kurira kwehwamanda, ndiko kwamuchaungana nesu. Iye Mwari wedu achatirwira.”+ 21 Pataiita basa, imwe hafu yavo yakanga yakabatawo mapfumo marefu, kubvira pakutsvuka kwoutonga kusvikira nyeredzi dzabuda. 22 Uyewo, panguva iyoyo ndakati kuvanhu: “Varume ngavapedze usiku, mumwe nomumwe nomushandi wake, vari mukati meJerusarema,+ vachava varindi vedu usiku uye vashandi masikati.” 23 Ini+ nehama dzangu+ nevashandi vangu+ nevarume vaiva varindi+ vaiva shure kwangu, takanga tisingabvisi nguo dzedu, mumwe nomumwe aine chombo chake chinoita zvokukandwa+ muruoko rwake rworudyi.